ရှင်တို့ ယောက်ျားတွေက မိန်းမတွေနဲ့ ထည်လဲ အိပ်တော့ **“**ယောက်ျားကောင်း
မောင်းမတစ်ထောင်**”**တဲ့။ မိန်းမတွေက ယောက်ျား တစ်ယောက်ထက်များ
ပိုအိပ်မိရင်တော့ မကောင်းတဲ့ မိန်းမ။ ကြေးစားမတဲ့။ အတော်လည်း မတရားတာပဲ။
ဒါက ဒီလို ရှိပါတယ် အစ်မကြီးရယ်။ သော့တံတစ်ချောင်းက သော့ခလောက်တွေ အများကြီးကို ဖွင့်နိုင်ရင်
**“**မာစတာကီး**”**လို့ ခေါ်တယ်လေ။ သော့ခလောက်
တစ်ခုကို ဘယ်သော့တံမဆို ဖွင့်နိုင်ရင်တော့ သုံးစားလို့မရတဲ့ သော့ခလောက် ဖြစ်သွားမှာပေါ့....
ဟိုဖက်အိမ်သာထဲက လူက လှမ်းနှုတ်ဆက်သည်။
ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ အလ္လာပသလ္လာပ စကားပြောရတာ စိတ်မသက်မသာ ရှိလှသည်။
အသေအချာ အကျအနထိုင်ပြီး ကိုယ့်ကိစ္စကို ဆက်ရှင်းမည် ကြံကာရှိသေး.
အလိုက်မသိတတ်သော ငနဲသားက ထပ်မေးလာပြန်သည်။
"ခင်ဗျား ဘာတွေ အလုပ်ရှုပ်နေလဲဗျ."
ဟာ… ဒီလူတော့ ခက်ပြီ. ဘာလဲကွာ… ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ ဒီလို
ဂွတီးဂွကျမေးခွန်းတွေ လာမေးနေတာ ဘာလဲ….
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မြန်လက်စသတ်ပြီး ထွက်သွားဖို့ စိတ်ကူးလိုက်သည်။
ဒါပေမယ့် နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခု ထပ်ထွက်လာပြန်သည်။
ထောင်းခနဲ ထွက်လာသော ဒေါသကို အသာချိုးနှိမ်လျက် အသံ ခပ်အုပ်အုပ်ဖြင့်
"မလုပ်နဲ့လေဗျာ. ကျွန်တော်လည်း ဒီမှာ အလုပ်ရှုပ်နေတာ.."
"နောက်မှပဲ ပြန်ဆက်တော့မယ်. ဟိုဖက်အခန်းထဲက သောက်ပေါတစ်ကောင်က ရူးသလို
နှမ်းသလိုနဲ့ ငါမေးသမျှ ပြန်လိုက်ဖြေနေလို့…."
မြို့ကြီးသားတစ်ယောက်ရယ် အခြားတဖက်တွင် အဘွားကြီးတယောက်ရယ် အရမ်းချောသော ကောင်မလေးတယောက်တုိ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်နေကြ လေသည်..
လှိုင်ခေါင်းတခုထဲရထားဖြတ်သွားချိန်တွင် ရထားထဲ၌် မှောင်သွားလေသည်.. ထိုအချိန်တွင် ‘ရွှတ’် ဆိုသော ပါးနမ်းသံနဲ့ ‘ဖြန်း’ ဆိုတော့ ပါးရိုက်သံတို့ကို တဆက်တည်း ကြားရပီး ခဏတာ ငြိမ်သွားလေသည်..
ထို့နောက် ရထားပေါ် အလင်းရောင်ရလာသောအခါ
အဘွားကြီးတွေးပုံမှာ “ဒီကောင်မလေး ငါ့သမီးဖြစ်ရင် ကောင်းမှာပဲ.. ဟိုနှာဘူး ၂ ကောင်ထဲမှ ၁ ကောင်ကောင်က ကောင်မလေးကို နမ်းလိုက်တော့ ကောင်မလေးက ပါးကိုပြန်ရိုက်လိုက်တာ ဖြန်းခနဲ နေတာပဲ”
ကောင်မလေးတွေးပုံမှာ “ဟိဟိ.. ဟို ငနာ၂ကောင်ထဲက ၁ကောင်ကောင်က အမှောင်ထဲမှာ ငါမှတ်ပီးတော့ အဘွားကြီးကို မှားနမ်းတာ အဘွားကြီး လက်စာမိသွားတယ်”
ခပ်ထောင်ထောင် မြို့ကြီးသားမှ သူ့ပါးသူပွတ်ရွေ့ တွေးပုံမှာ “ဟိုတောသား ပါးနမ်းတာက ကောင်မလေးက ငါ့ကိုမှားပီးရိုက်ရတယ်လို့”
တောသားကပြုံးကာ တွေးပုံမှာ “ဟဲဟဲ တော်တော် တော်တဲ့ငါပဲ.. ငါ့လက်ဖ၀ါး ငါနမ်းပီးတော့ ဘေးကကောင်ကို ဘေးကကောင်ကို အမြင်ကတ်ကတ်နဲ့ ရိုက်လိုက်တာ တော်တော်အရသာရှိတာပဲ…”
ရေကန်ကြီးတခုတည်းထဲတွင် ငါးဖမ်းကိရိယာအစုံပါသော ငါးဖမ်းလှေ လေးတစင်းဟာ အရိပ်ကောင်းသောနေရာတွင်ရပ်ထားလေသည်.. ၎င်းလှေပေါ်၌ အမျိုးသမီးတယောက်သည် စာအုပ်တအုပ်ကို
စိတ်ဝင်တစား ဖတ်နေလေသည်.. လေအဝှေ့ကြောင့် လှေလေးသည် ကမ်းနှင့် တဖြည်းဖြည်းကွာရွေ့ ငါးမဖမ်းရ နယ်မြေတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာသည်.. ထိုအချိန်တွင် ကန်စောင့်ရဲလှေတစင်းရောက်လာရွေ့…
ကန်စောင့်ရဲ - ငါးမဖမ်းရ နယ်မြေထဲမှာ ငါးဖမ်းတဲ့အတွက် မင်းကိုတရားစွဲမယ်
အမျိုးသမီး - ကျွန်မ ငါးဖမ်းတာမဟုတ်ဘူး စာဖတ်နေတာ မမြင်ဘူးလား..
ကန်စောင့်ရဲ- ခင်ဗျားမှာ ငါးဖမ်းပစ္စည်း သက်သေအကုန်ပါတယ်.. မငြင်းပါနဲ့..
အမျိုးသမီး - ဒီလိုဆိုရင် ရှင်ကျွန်မကို အဓမ္မကျင့်တယ်လို့ တရားပြန်စွဲမယ်
ကန်စောင့်ရဲ - ဘာဖြစ်လို့လဲ
အမျိုးသမီး - ရှင့်မှာလဲ သက်သေခံပစ္စည်းအကုန်ပါတာပဲ
တောမှ အမျိုးသမီးကြီးတယောက်သည် ရုပ်ရှင်ရုံလက်မှတ်စစ်ကို
ပါးရိုက်သော အမှုနှင့် ရန်ကုန် မြို့နယ်တရားရုံးသို့ ရောက်ရှိလာသည်..
တရားသူကြီး - အဒေါ်ကြီး ဘာ့လို.ဒီလူကို ပါးရိုက်ရတာလဲ..
အမျိုးသမီးကြီး - တရားသူကြီးမင်းရှင့်..
ကျွန်မက လက်မှတ်ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြပါတယ်၊
ဒါပေမယ်.သူက ကျွန်မလက်မှတ်ကို ဆွဲဖြဲပစ်တယ်လေ..
စိတ္တဇဆေးရုံတွင် မနက်တိုင်းကျန်းမာရေးတိုးတက်မှုရှိမရှိ ဆရာဝန်ကြီးက လူနာများကို စမ်းသပ်လေ့ရှိသည်..
တမနက်ခင်းတွင် ဇွန်း ခက်ရင်း တစုံပါသော ပန်ကန်းပြားအလွတ်တချပ်စီကို လူနာတယောက်စီရှေ့၌ ချပေးထားသည်..
ထိုအခါ လူနာများသည် စားစရာမပါသော ပန်ကန်ပြားထဲသို့ ဇွန်း ခက်ရင်းနဲ့နှိုက်ကာ အားပါးတရ စားကြလေသည်..
ဆရာဝန်ကြီးသည် ကျန်းမာရေးတိုးတက်မှု မရှိကြောင်းတွေ့ရသောကြောင့် စိတ်ညစ်သွားသည်..
သို့သော် လူနာတစ်ယောက်သည် မစားပဲ ပန်းကန်ပြားကို စိုက်ရွေ့ ကြည့်နေလေသည်..
ကျန်းမာရေးတိုးတက်နေသည်ဟုထင်ရသော ထိုလူနာအား ဆရာဝန်ကြီးက -'ဟေ့ကောင် မင်းဘာ့ကြောင့်မစားတာလဲ'
မင်္ဂလာဦးည လွန်မြောက်ပြီး ဇနီးမောင်နှံ ၂ယောက် . .ယောက်ျားဖြစ်သူအတွက်
ဖိနပ်ဆိုင်တွင် အရောင်းဝန်ထမ်းက နံပါတ် ၄၅ ယူလာသည် ။ လူငယ်စီးကြည့်သည် ။
နံပါတ်၄၆၊ ထို့နောက် ၄၇ မတော်ပါ ဖိနပ်မှာ ငယ်နေသည်။
"ကျွန်မတို့ဆိုင်မှာ ဒိထက်ကြီးတဲ့ နံပါတ်မရှိတော့ဘူးရှင့်"
စိတ်ပျက်လက်ပျက်ထွက်လာကြရင်း ဇနီးဖြစ်သူကပြောသည် . .
"ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ဘူး ရှင့်ခြေထောက်တွေက ကြီးလွန်းတာကိုး"
"အေးကွာ ငါကတောသားကိုး ဖိနပ်မပါပဲ လမ်းလျှောက်ထွက်တာများလို့ ခြေထောက်တွေ
"ရှင် ဘောင်းဘီမ၀တ်ပဲလျှောက်ရင် ပိုတောင်ကောင်းဦးမယ်"
ကိုယ်ဝန်အရင့်အမာနှင့် မိန်းမဖြစ်သူ အလွန်အမင်း ဗိုက်နာနေသည့်အတွက် ယောက်ျားဖြစ်သူက ဆရာဝန်ကို အသည်းအသန် ဖုန်းဆက်ခေါ်သည်။
"ရှင် အပြင်မှာပဲနေနော်၊ အခန်းထဲဝင်မလာနဲ့"
ခဏကြာတော့ ဆရာဝန်မကြီးက တံခါးဟလိုက်ပြီး ယောက်ျားဖြစ်သူကို လှမ်းပြောတယ်။
ယောက်ျားဖြစ်သူက ယူပေးလိုက်တယ်။ ဆရာမကြီးဝင်သွားပြီး ခဏနေတော့ ပြန်ထွက်လာတယ်။
"စို့ နဲ့ တူသာ ပေးပါတော့"
ဒီတော့ လူနာရှင်ယောက်ျားက စိုးရိမ်တကြီးနဲ့
၊ လူနာရဲ့ အခြေအနေက တော်တော်ဆိုးလို့လား"
"မပြောတတ်သေးဘူးရှင့်၊ ဆေးသေတ္တာကို ဖွင့်လို့မရသေးလို့ လူနာကို မကြည့်ရသေးဘူး"
ခရီးသည်တင်လေယာဉ်တစ်စီးတွင် အလွန်ကို ထုံအလွန်းသော လူတစ်ယောက် လိုက်ပါလာသည်။
ထိုအခါ လူအ က သူ့သူငယ်ချင်းကို ပြောလိုက်ပုံက ‘သေချာပြီ။ အဲဒါဆို ဒီညတော့ လေယာဉ်ပျံပေါ်မှာပဲ အိပ်ရတော့မယ်’
အချိန်မှာ ဘယ်လိုဖြစ်သလဲ ဆိုတာကိုရေးချင်တာ...........
ကာလတွေ ရွေ့လျားလာတော့ ကလေးတစ်ယောက်ပွားစည်းလာတယ် ...
အခေါ်အဝေါ်လေးကလဲ ပြောင်းလာတယ် ကိုဒသဂီရိက သူ့မိန်းမ ကို ကလေးတစ်ယောက်အမေလို့ခေါ်သတဲ့ လေ
ခုဆိုညနေစောင်းလာရင် လမ်းလျှောက်ထွက်တက်လာတယ်... သွားခါနီးရင်လဲ ကဲ ကို အပြင်သွားလိုက်ဦးမယ်
မမိန်းမက ပြုံးပြုံးလေး ကြည့်လို့ ကျန်ခဲ့တာပေါ့ ... ကိုဒသဂီရိက KTV ,တို့ ဘာတို့ သွားပြီ ရေလည်လန်းနေတာပေါ့
လစ်မလို့ခြေလှမ်းနေတုန်းမိန်းမက ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ ပြန်ပြောလိုက်တဲ့ စကားကြောင့် နောက်ကိုဒသဂီရိအပြင်ကိုမသွားတော့ဘူးတဲ့ .
Author Anonymous at 10:22:00 PM